घुम्न जादै हुनुहुन्छ ? यि कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस ?
By ourtourism news On : October 1, 2018
तपार्इ घुम्न जादै हुनुहुन्छ भने यि कुराहरूमा ध्यान दिनुहाेला ।
सर्वप्रथम होटल छान्नुभन्दा पहिले आफ्नो आवश्यकता र बजेटको टुङ्गो लगाउनुहोस । बजेट व्यवस्थापनपछि मात्र होटल खोज्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।होटलले उपलब्ध गराउन सेवा सुविधाबारे जानकारी लिनुहोस् । आफ्नो बसाई अवधिभरीको औषत खर्चको टुङ्गो लगाउनुहोस् ।
होटलको अवस्थिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । गन्तव्यका लागि सहज हुने होटल छान्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै होटल आसपासको परिस्थितिको पनि जानकारी लिनुहोस् ।होटल छान्दा सकेसम्म स्थानीय स्वाद पाइने ठाउँलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । सामान्य खानपिनको सुविधाभन्दा स्थानीय स्वादसहितको होटलले तपाईको यात्रालाई स्मरणीय बनाउनेछ ।
वातावरयामैत्री होटलको छान्नु स्वच्छ पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग पुयाउनु हो । त्यसैले यस्ता होटलको छनोटले तपाईलाई जिम्मेवार पर्यटक बनाउनेछ ।यदि तपाई परिवारसँगै हुनुहुन्छ भने पारिवारिक वातावरणसहितको होटलमा बस्नुहोस । यस्ता होटलले तपाईलाई यात्रामै पनि पारिवारिक आत्मीयताको अनुभव गराउनेछ् ।
होटललको बारेमा होटलमा पुगेकासँग जानाकारी लिन सकिन्छ ।सकेसम्म यातायतको सुविधा भएको होटलमा बस्दा अत्यावश्यक समयमा त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । होटलको चेक आउट समय ख्याल गर्नुहोस् । त्यस्तै बुकिङ रद गर्ने होटलको नीति पनि जानकारीमा राख्नु उत्तम हुन्छ । हाेटमा ठगिएकाे महसुस भए 9849242730 मा फाेन गर्नुहाेला ।
Previous Post Previous post: जलजला पर्यटनको गन्तब्य
Next Post Next post: नगरकोट जाँदा वाह्य पर्यटकले दोहोरो कर तिर्नु पर्ने